राजनीतिकर्मी उदयकान्त ठाकुरलाई साहित्यकारको रुपमा पनि चिन्नु पर्छः डा. रेवतीरमण लाल बरिष्ठ साहित्यकार, मैथिली – doodhmati || dudhmati
Home / बातचित / राजनीतिकर्मी उदयकान्त ठाकुरलाई साहित्यकारको रुपमा पनि चिन्नु पर्छः डा. रेवतीरमण लाल बरिष्ठ साहित्यकार, मैथिली
राजनीतिकर्मी उदयकान्त ठाकुरलाई साहित्यकारको रुपमा पनि चिन्नु पर्छः डा. रेवतीरमण लाल बरिष्ठ साहित्यकार, मैथिली
Sujeet Jha January 25, 2018	बातचित 523 Views
प्र. उदयकान्त ठाकुरलाई तपाई राजनेता वा साहित्यकारको रुपमा चिन्नु हुन्छ ?
जीवनको अधिकांश समय राजनीतिमा बिताउनु भएकाले राजनीतिबाट उहाँलाई अलग्याउन सकिदैन तर साहित्यमा पनि उहाँको कम्ती योगदान छैन । उहाँले कयो कविता लेख्नु भएको छ, कविता प्रधान पत्रिकासम्म निकाल्नु भएको छ ।
जनक नाउँको उदयकान्त ठाकुरले कविता प्रधान पत्रिका निकाल्नु भएको थियो । दूई बर्ष जती प्रकाशन भएको थियो । द्वैमासिक पत्रिका हुँदा पनि पाठकहरु खोजी खोजी पढ्ने गर्थे । जनकको अतिथि सम्पादक भुवनेश्वर पाथेय हुनु हुन्थ्यो । राजनीतिमा उहाँ बढी समय दिन थालेपछि सो पत्रिका पाथेयजीलाई दिनुभयो । मलाई पनि सम्पादन गर्न उहाँले सल्लाह दिनु भएको थियो । म नेपाल राष्ट्र बैंकमा जागिरे भएकाले समय दिन सकिन तर सो पत्रिकाको अधिकांश अंकमा मेरो कविता छापिएको छ ।
प्र. कविता प्रधान पत्रिका कस्तो थियो ?
जनक नाउँको उहाँले कविता प्रधान पत्रिका निकाल्नु भएको थियो । दूई बर्ष जती प्रकाशन भएको थियो । द्वैमासिक पत्रिका हुँदा पनि पाठकहरु खोजी खोजी पढ्ने गर्थे । जनकको अतिथि सम्पादक भुवनेश्वर पाथेय हुनु हुन्थ्यो । राजनीतिमा उहाँ बढी समय दिन थालेपछि सो पत्रिका पाथेयजीलाई दिनुभयो । मलाई पनि सम्पादन गर्न उहाँले सल्लाह दिनु भएको थियो । म नेपाल राष्ट्र बैंकमा जागिरे भएकाले समय दिन सकिन तर सो पत्रिकाको अधिकांश अंकमा मेरो कविता छापिएको छ ।
जीवनको अधिकांश समय राजनीतिमा बिताउनु भएकाले राजनीतिबाट उदयकान्त ठाकुरलाई अलग्याउन सकिदैन तर साहित्यमा पनि उहाँको कम्ती योगदान छैन । उहाँले कयो कविता लेख्नु भएको छ, कविता प्रधान पत्रिकासम्म निकाल्नु भएको छ ।
प्र. उहाँको कविताको मूल विषय राजनीति हुन्थ्यो कि बाहिर ?
राजनीतिबाट आएका कारणले केही रचना राजनीतिसंग प्रभावित हुन्थ्यो तर अधिकांश रचनामा यहाँका मूल समस्याहरुलाई उहाँले उत्थान गर्नु हुन्थ्यो । उदय जनकपुरे नाउँले लेख्नु हुन्थ्यो । जसरी उहाँको भाषण ओजपूर्ण हुन्थ्यो त्यसरी नै रचनामा पनि वेट देखिन्थ्यो ।
मलाई पनि आश्चर्य लागि रहेको छ । मैले आफैँ कयो पटक कविता संग्रह निकाल्न उदयकान्त ठाकुरलाई आग्रह गरेको थिएँ तर उहाँ राजनीतिलाई नै प्राथमिकता दिनुभयो । मलाई लाग्छ उदयजीको कविता अहिले कुन अवस्थामा छ त्यो खोजी गरी पुस्तक प्रकाशन तर्फ ध्यान दिनु पर्छ । यसमा उहाँका पारिवारिक सदस्यहरुले गम्भिरता देखाउनु पर्छ । मैथिलीका संघ संस्थाहरु पनि यसका लागि अगाडि आउनु पर्छ ।
प्र. यस्तो कवि हुँदा पनि उहाँ पुस्तक प्रकाशन तर्फ किन ध्यान दिनु भएन ?
मलाई पनि आश्चर्य लागि रहेको छ । मैले आफैँ कयो पटक कविता संग्रह निकाल्न उहाँलाई आग्रह गरेको थिएँ तर उहाँ राजनीतिलाई नै प्राथमिकता दिनुभयो । मलाई लाग्छ उदयजीको कविता अहिले कुन अवस्थामा छ त्यो खोजी गरी पुस्तक प्रकाशन तर्फ ध्यान दिनु पर्छ । यसमा उहाँका पारिवारिक सदस्यहरुले गम्भिरता देखाउनु पर्छ । मैथिलीका संघ संस्थाहरु पनि यसका लागि अगाडि आउनु पर्छ ।
प्र. राजनेताहरुमा साहित्यिक गुण कमैमा देखिने गरिएको पाइन्छ ?
यो प्राथमिकताको विषय हो । नेपालमै राजनीतिमा चोटीमा पुगीसकेका व्यक्ति साहित्यमा पनि अलग छाप छोडेका छन । विपी कोइराला, लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भई सक्दा पनि साहित्य लेखनलाई निरन्तरता दिनुभयो । मैथिलीकै कुरा गर्दा रामाकान्त झा राजनीतिमा निकै काम गर्नु भएको थियो तर उहाँलाई साहित्यले अमरत्व प्रदान गर्यो । म फेरी भन्न चाहन्छु उदयकान्त ठाकुर जसलाई साहित्यमा उदय जनकपुरे नाउँले चिनिन्थ्यो उहाँको पुस्तक प्रकाशन गर्नु पर्छ । यसले उहाँको योगदानलाई बल दिने छ ।
Tags उदयकान्त ठाकुर डा. रेवतीरमण लाल भुवनेश्वर पाथेय मैथिली
Previous सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा सचिव नियुक्त
Next धनुषाको जलाधी साझेदारी वनबाट घाइते फेला परेका अजिङ्गर सर्पको उद्धार, अहिले उपचार हुँदै ।। धनुषाधाममा अवलोकनका लागि राख्न सकिने